MDC Archives – Nehanda Radio
Main opposition Citizens Coalition for Change (CCC) leader Nelson Chamisa says he misses the late pro-democracy leader Morgan Tsvangirai and has vowed to "complete the journey and deliver real change! THIS TIME!"
Feb 1, 2022 34,840
Zimbabwe’s main opposition leader Nelson Chamisa believes that consistency is critical when fighting for democracy in Africa.
Jan 27, 2022 55,055
Social media is awash with Zimbabweans endorsing the yellow colour adopted by the newly rebranded opposition Citizens Coalition for Change (CCC) led by Nelson Chamisa.
Sep 24, 2021 30,663
Jun 3, 2021 24,980
Apr 1, 2021 48,800
Zanu PF Midlands provincial chairperson Daniel Mackenzie Ncube is being accused of bribing MDC officials to join Zanu PF, allegations he dismissed claiming the ruling party had "attractive policies". This comes after former cabinet…
Dec 20, 2020 31,338
The piece by former Zanu PF elections strategist Jonathan Moyo chronicling the missed opportunities by the opposition in Zimbabwe's political history has once again raised debate on the state of opposition politics in Zimbabwe.
Mar 30, 2020 20,455
Mar 20, 2020 39,567
Research into recently held by-elections in Chimanimani and Mangwe by the Zimbabwe Election Support Network (ZESN) has shown that the opposition Movement for Democratic Change (MDC)’s campaigns in both wards were “low key” compared to those…
Jul 4, 2022 26,733